I-Beachside Villa - Mui Ne - Phan Thiet - Netflix + - I-Airbnb
I-Beachside Villa - Mui Ne - Phan Thiet - Netflix +
Phan Thiet City, Binh Thuan Province, i-Vietnam
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Tram
I-Luxury Beachside ehlala e-Mai Ne Villa, etholakala endaweni ephephile kule villa yesimanje enakho konke, enesiphephethisi somoya, isikrini esiphelele somiyane esivikelekile futhi inawo wonke amasevisi adingekayo okwenza ukuhlala kwakho kujabulise futhi kukhululeke. I-villa inokubukwa okuhle kolwandle, indawo yokupaka ezimotweni ezingu-2; amagumbi okulala amabili angu-4, amagumbi okugezela angu-4.5, izindlu zangasese ezingu-5, isidlo sakusihlwa esisemthethweni kanye negumbi lokuphumula elingashintsha libe yikamelo elengeziwe lesine ngokusebenzisa umbhede omkhulu ofihliwe.
Ngaphandle: Kunendawo yokosa igesi yangaphandle, ingaphambili nengemuva lezingadi ezinechibi lezinhlanzi, indawo yokudlela yangaphandle endaweni ephumule ngempela. Ukunethezeka kwakho okwengeziwe i-patio yangaphambili nayo ifakwe amafeni okugcoba nesihlalo sompheme. Kukhona nensimbi yomnyango enokuqapha kwevidiyo eqoshiwe esangweni elingaphambili elikunikeza ikhono lokubona nokukhuluma nanoma ngubani obeka insimbi, lokhu kutholakala kalula ekhishini. Wonke amakamelo ahloliwe/ahlungelwe umiyane, aphethwe umoya oshisayo + kanye ne-celling fated.
Izikhungo: Ungaphumula noma uthathe uhambo olufushane uya ebhishi; ujabulele ntambama engalali ezungeze amachibi okubhukuda angu-3 noma udlale ithenisi noma usebenzise i-gymnasium enakho konke, i-villa itholakala ebangeni elifushane nje ukusuka kwamanye amabhishi amahle kakhulu e-Vietnam; kulabo abathanda ukuvakasha ungazama i-kitesurfing noma i-windsurfing; imitholampilo yokufundisa iyatholakala kokubili ekufundeni noma ekuqasheni.
I-Dinning: Uma unesifiso sokudla kwase-Asia noma kwase-Western kunama-resort/izindawo zokudlela ezingaphezu kuka-100 ezitholakala ngokugibela amatekisi amafushane; ungajabulela kokubili ukudla okumnandi noma ukuhlola bese uzama ukudla okumnandi kwendawo. uma ukhetha ukudla ekhaya ungapheka umkhosi ekhishini noma nje uthathe ifoni futhi uhlele i-pizza noma okunye ukudla okusheshayo okuzolethwa emnyango wakho.
Ukusekela: I-villa estate iphethwe yiqembu lochwepheshe elikhuluma isiNgisi futhi inesevisi yokuphepha yamahora angu-24, noma yiziphi izinkinga noma izimfuneko zokulungisa isevisi itholakala izinsuku ezingu-7 ngeviki kuhlanganise nezikhathi zeholide.
Imininingwane Eyengeziwe: Le villa ingahlalisa abantu abadala abangu-8 ngokunethezeka. Isikhathi esigcwele noma ukuqasha kwesikhathi eside kuyatholakala futhi kungaxoxwa ngokuhlukile. Izilwane ezifuywayo zamukelekile uma zilawulwa kahle ngabanikazi bazo. Uhlu lwezinombolo zocingo ezifanele ezihlanganisa; ukuphathwa, ukuphepha, amatekisi kanye namasevisi okulethwa kokudla njll kuzotholakala ku-villa.
Kwabiwe ngaphandle amanzi anosawoti i-lap pool
4.80 · 59 okushiwo abanye
Isigodlo Sewayini - 0.5Km (Ungabuka kusuka ku-patio yaphansi phezulu)
Ibhishi lendawo - 1.5Km (Ungabuka kusuka ku-patio yaphansi phezulu)
I-Sinks Golf Course - 2Km (Ungabuka kusuka ku-patio yaphansi phezulu)
I-Mai Ne Beach - 3Km
Izindawo Zokudlela Zasendaweni (ngasogwini) - 3-7Km
Ithempeli Lamandulo le-Poshanu Itholakala - 3km
I-Kite & Wind Surfing –
5Km Indawo ye-Mai Ne Tourist – Izindawo Zokuphumula, Izindawo zokudlela - Izitolo Zezipho - 5Km
I-Ham Tien Mud Spa Centre –
6Km I-Mai Ne Town & Fishing Village -
8Km I-Phan Thiet City -
8Km I-Red noma i-White Dunes - 12Km
Ukulala kwe-Buddha Kutholakala – 25Km
Ngitholakala ukuthi ngithintwe noma nini ngocingo noma nge-imeyili. Ngikhuluma isiNgisi nesi-Vietnam.
Hlola ezinye izinketho ezise- Phan Thiet City namaphethelo